यसो भन्दैमा सबै खराब छन भन्नेपनी होईन । कतीले गरेका उदाहरणिय कामहरुकै कारणले समाज र देशको शिर उच्च नभयको पनी होईन ।
आम पाठक , आम नागरीकहरुलाई थाहा भएकैकुरा हो दुर्लभ भनेको के ? जुन थोरै मात्र छ , जो उदाहरणीय छ , जुन चिजलाई औलामा गन्न सकीन्छ, वा जसले गरेका कर्महरु प्रसंसनिय छन ,नयाॅंछन अरुलेपनी पछ्याउन लायक छन ।
लेखक : राजन अधिकारी
सायद, आम नागरीकसमाज, प्रशासक, राजनितिज्ञ र यो देशको भुगोलभित्र बाहीरका अधिकांस व्यक्तीहरुमाझ चिरपरीचित नाम हो ‘’लिलाधर अधिकारी’’। सबैको पृय ब्यक्ती पनी हो उहाॅं । एक कुशल प्रशासक , कुशल सेवक र कुशल ब्यवस्थापक लिलाधर अधिकारीको जन्म विसं २०२८ साल आश्विन २ गते कास्कि जिल्लाको माछापुछ्रे ४ लाहाचोकमा भयको थियो ।कास्की कै गौरीसंकर मावि बाट २०४३ सालमा एस.एल.सि गर्नु भयका अधिकारीले त्रीभुवन विश्वविध्यालयबाट MBA . MPA मा मास्टर डिग्री सम्मको अध्यन गर्नु भयको छ । यस संगै अन्तराष्ट्रीय विकाश नितीमा दक्षिण कोरीयाको सियोल नेश्नल युनिभर्सिटी बाट डिग्री सम्मको अध्यन गर्नु भयको छ । उहाॅं कानुनको पनी ज्ञाता हुनुहुन्छ । उहाले कानुनमा स्नातक सम्मको अध्यन पुरा गर्नु भयको छ ।
पारीवारीक हिसावले मध्यम वर्गीय परीवारमा जन्मिनु भयका अधिकारीका श्रीमती दुई छोरी र एक छोरा हुनुहुन्छ । परीवार र गाॅंउघरमा अत्यन्तै सालीन , सरल , र सहयोगी ब्यक्तीको रुपमा परीचित अधिकारी २०५४ सालमा तत्कालिन लाहाचोक गाविसको गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित गाविस अध्यक्ष पनी हो । गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित हुॅंदा उहा जम्मा २५ बर्षको हुनुहुन्थ्यो । २०५४ देखी २०५९ सम्म गाविस अध्यक्ष भयर समाजसेवा गर्नु भयका अधिकारी त्यतीवेलानै त्यस क्षेत्रको चर्चित व्यक्ती हुनुहन्थ्यो ।
आफ्नो राजनितिक यात्रालाई त्यहिबाट विराम लगायर २०५९ साल फाल्गुनमा साखा अधिकृतको पद बाट सरकारी सेवामा प्रवेस गर्नुभयका अधिकारी तत्काली समयमा राष्ट्रीय योजना आयोगको सचिवालयमा साखा अधिकृतको जिम्वेवारी समाल्नु भयको थियो ।
२०७२/७३ मा बैतडी जिल्लाको प्रमुख जिम्वेवारी सम्हाल्नु भयका अधिकारीले थुप्रै जनपछीय कामहरु गर्दै आउनु भयको छ । त्यहाको शान्ती सुरक्षा , विकास निर्माण ,त्यहाको सरकारी सेवालाई गाॅंउ गाॅंउ पुर्यायको , शुशासन कायम गराउन ठाउ ठाउमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम संचालन गरेको र त्यहा रहेका विकृती विसंगतीहरुलाई हटाउनमा उहाको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको त्यस जिल्लाका वुद्दीजिवीहरु बताउछन । उहा एक कुशल प्रशासक र जनताको अभिवाबक भयको बैतडीका जनताको भनाई छ।
त्यस पछी म्यग्दी र धादिंगमा साहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भुमिका निर्वाहा गरी सक्नु भयका लिलाधर अधिकारीले ति जिल्लाहरुमा पनी उदाहरणीय काम हरु गर्नु भयको छ । म्याग्दी जिल्लामा रहदा उहाॅंले एउटा नमुना योजना ल्याउनु भयको थियो । त्यो हो हेलिप्याड निर्माण गर्ने । म्याग्दी जिल्लामा रहेका ४५ वार्ड मध्य ३३ वटा वडामा हेलीप्याड निर्माण गर्ने उहाॅं देशकै पहीलो प्रशासक पनी हो । जसको निर्मणबाट दुर दराजमा रहेका र स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित जनताका लागी हवाईसेवाको सहजता भयको थियो भने ईमर्जेन्सी सेवा र स्वास्थ्य सामाग्रीको ढुवानीमा सहजता भयको छ । यसैगरी धादिंगमा पनी उहाले गर्नुभयका प्रसस्तै उदाहरणिय कार्यले गर्दा म्याग्दी र धादींग बासीकालागी उहा एउटा भगवानकै रुप भयको त्यहाका जनताले बतायका छन ।
यसैगरी अध्यागमन विभागका डाईरेक्टर राम चन्द्र तिवारीले , उहाॅं अत्यनतै मेहनेती ,मिलनसार र पेषा प्रती अनुशासित व्यक्ती भयको वताउनु भयो । जनतासंग घुलमिल हुन रुचाउने र आफ्ने जिम्बेवारी बहन गर्न अत्यन्तै लगनसिल भयर लाग्ने बानी भयका अधिकारी एक निष्ठावान प्रशासक भयको समेत उहाॅंले बताउनु भयको छ ।
जादा स्वागत र फर्कदा रुवायर फर्कने देशकै एक जनपछीय प्रशासकमा पर्नुहुन्छ लिलाधर अधिकारी । जनता संग घुलमिल हुन रुचाउने सरल, आत्मिय र जनताका समस्यामा तत्काल परीचालीत हुने बानीकै कारण उहाॅं जनतामाझ अत्यन्तै लोकपृय हुनुहुन्छ ।जिवनलाई सोचने , बुझने उहाको फरक दृष्टीकोण छ । उहाॅंका अनुसार , ‘’सकारात्मक सोचकासाथ अघिबढनु पर्ने र मानव जातीको विकासकालागी गर्ने गतिशिल अस्तित्व नै जिवन हो’’ जिवनमा केही नयाॅं गर्नु पर्ने र त्यो आफ्नालागी नभई समाज र राष्ट्रको सर्वपरी हित हुनेगरी हुनुपर्ने र यसका लागी सबैले आ-आफनो ठाउबाट सकेको योगदान गर्नुपर्ने उहाको भनाई छ।
हाल बर्दीया जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहनु भयका अधिकारीले जनतामा चेतनाको स्तर विकास गर्नु पर्ने , सामुदाईक बस्ती स्तरमै नागरीक शिक्षा लागुगर्नु पर्ने र सदरमुकाम केन्द्रीत कार्यपद्दतीलाई व्यवस्थापन गरेर संघिय सरकारको अवधारणा अनुसार सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने , यस कुरालाई अभियानकै रुपमा चलाउनु पर्ने र संघियताको मर्म अनुरुप स्थानीय सरकारहरुलेपनी जनताको घरदैलोमै सेवा प्रवाहा गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु हुन्छ ।
बर्दीया जिल्लामा कार्यरत अधिकारीले बर्दीया जिल्लाको समग्र विकाशकालागी आफु लागीपरेको बताउनु भयको छ । यहाॅं थुप्रै संभावना र चुनौति छन त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती आफुमा रहेको र सहजै तरीकाले समाधान निकाल्ने उहाको भनाई छ । यसका लागी जनतालाई साथसाथै लियर अगाडी बढने र जनताबाट आफुलाई पुर्ण सहयोग रहने विस्वास पनी उहाले ब्यक्त गर्नुभयो ।
कृषिको भण्डार मानिने बर्दीया आन्तरीक र वाह्य पर्यटनको प्रचुर संभावना बोकेको ठाॅंउ हो यो पोखरा र सौराहा जस्तै पर्यटकीय हव भयको जिल्ला बन्न सक्छ यहाॅं अनगिन्ती तालतलैयाहरु छन , राष्ट्रीय निकुन्ज छ , बबै नदी र कर्णाली नदी यहीछन यसकारण यस जिल्लालाई पर्यटकीय हव बनाउन सकिन्छ भन्दै उहाॅंले यहाका अनगिन्ती गाॅंउहरुलाई ‘’फिसिगं भिलेज’’ को रुपमा विकास गर्न सकीने र यसका लागी आफुले सबैसंग सहकार्य गरीरहेको पनी बताउनु भयको छ ।
यस संगै अवैध चोरी निकासी , पैठारी र लागुऔषध नियन्त्रणमा आफु कडाईका साथ लाग्ने बताउनु भयो । जिल्लामा चुनौतिको रुपमा रहेको बाढीबाट हुनसक्ने डुबान र क्षतिबाट सुरक्षित रहन विपद उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्न जरुरी रहेको समेत उहाले बताउनु भएको छ ।
जाहाॅं गयो त्यही अत्यन्तै एकाग्रताका साथ खटीईरहने अधिकारीको यही बानी नै सबैभन्दा बढी लोकपृय छ । जो ब्यक्ती निरन्तर जनता संगै , जनताकै सेवामा खटीईरहन्छ त्यसलाई कस्ले मन नपराउला र ! आफुमा म ठुलो भन्ने दम्भ नभयपछी सबैको प्यारो किन नहोला र ! रुचाउने पनी यस्तै ब्यक्ती लाई त हो नि ! आउदा खुसी हुने र जादा रुनुपर्ने कारण पनि त यही हो नि !देशैभरका प्रशासक हरुले सिक्नुपर्ने कुरा यही छ। लोकपृयता खोज्ने होईन गरेर आर्जन गर्ने कुरा हो । जनतामा जनता जस्तै भयर गर्ने व्यवहार हो र जनताको पृय भयर जनता खुसी भयर दिने उपाहार हो ।
रञ्जनको जन्मकैद घटाउने फैसलापछि अब धेरै छोरीहरु मारिएलान् भन्ने डर लागेको छ ! - पछिल्लो